Myanmar's #1 Real Estate website, for Sale or Rent | ShweProperty.com
တိုင်း ၊ ပြည်နယ် ရွေးရန်
မြေကွက် / ခြံ
No Min100 သိန်း200 သိန်း300 သိန်း400 သိန်း500 သိန်း600 သိန်း700 သိန်း800 သိန်း900 သိန်း1000 သိန်း1500 သိန်း2000 သိန်း2500 သိန်း3000 သိန်း3500 သိန်း4000 သိန်း4500 သိန်း5000 သိန်း6000 သိန်း7000 သိန်း8000 သိန်း9000 သိန်း10000 သိန်း15000 သိန်း30000 သိန်း
No Max100 သိန်း200 သိန်း300 သိန်း400 သိန်း500 သိန်း600 သိန်း700 သိန်း800 သိန်း900 သိန်း1000 သိန်း1500 သိန်း2000 သိန်း2500 သိန်း3000 သိန်း3500 သိန်း4000 သိန်း4500 သိန်း5000 သိန်း6000 သိန်း7000 သိန်း8000 သိန်း9000 သိန်း10000 သိန်း15000 သိန်း30000 သိန်း30000+ သိန်း
No Min1 သိန်း2 သိန်း3 သိန်း4 သိန်း5 သိန်း6 သိန်း7 သိန်း8 သိန်း9 သိန်း10 သိန်း
No Max1 သိန်း2 သိန်း3 သိန်း4 သိန်း5 သိန်း6 သိန်း7 သိန်း8 သိန်း9 သိန်း10 သိန်း10+ သိန်း
No Min500 sqft1000 sqft1500 sqft2000 sqft3000 sqft4000 sqft
No Max500 sqft1000 sqft1500 sqft2000 sqft3000 sqft5000 sqft5000+ sqft
အိမ်ခြံမြေပြပွဲများအိမ်ခြံမြေလမ်းညွှန်ART OF LIVINGသတင်းအကျိုးဆောင်များCareers Bookings
ဝယ်ရန် ငှားရန် စီမံကိန်း အသစ်များ
အိမ်ခြံမြေပြပွဲများ အိမ်ခြံမြေလမ်းညွှန် ART OF LIVING သတင်း အကျိုးဆောင်များ Careers Bookings
No Max1 သိန်း2 သိန်း3 သိန်း4 သိန်း5 သိန်း6 သိန်း7 သိန်း8 သိန်း9 သိန်း10 သိန်း
No Max100 သိန်း200 သိန်း300 သိန်း400 သိန်း500 သိန်း600 သိန်း700 သိန်း800 သိန်း900 သိန်း1000 သိန်း1500 သိန်း2000 သိန်း2500 သိန်း3000 သိန်း3500 သိန်း4000 သိန်း4500 သိန်း5000 သိန်း6000 သိန်း7000 သိန်း8000 သိန်း9000 သိန်း10000 သိန်း15000 သိန်း30000 (သိန်း) နှင့်အထက်
No Max1 သိန်း2 သိန်း3 သိန်း4 သိန်း5 သိန်း6 သိန်း7 သိန်း8 သိန်း9 သိန်း10 (သိန်း) နှင့်အထက်
Sort by : ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရောင်းရန် / ငှားရန်ရှိသော အိမ်ခြံမြေများ
Sort by: ကြော်ငြာစိတ်ကြိုက် စီစစ်ရန်
Get New Homes
in Myanmar by Email
Get New Homes in Myanmar by Email
email me properties
You have already subscribed for this result.
Your search properties has been saved
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ( ၆ ) ရပ်ကွက် ၊ ကုန်းဘောင် ( ၁၅ ) လမ်းမှ ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း
► BCC Pending
အရောင်းစျေးနှုန်း 840 သိန်း မှစတင်ပါသည်
တောင်ဥက္ကလာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အသေးစိတ် ကြည့်ပါဖုန်းဆက်ရန်09 958 777 888အီးမေးလ်ပို့ပါ
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ( ၆ ) ရပ်ကွက် ၊ ကုန်းဘောင်…
ShweProperty Project Sales
Dear Agent, I am interested in this property posted on ShweProperty.com and would like to request more information. Could you please contact me back as soon as possible? Thank you.
Keep me updated with real estate news
ဖုန်းခေါ်ဆိုသောအခါ အဆင်ပြေစေရန် အတွက်ShweProperty.com တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပေးပါရန်
Advertiser : ShweProperty Project Sales
Property ID: S-1203949
Asking Price : 840.00
Mobile : 09 958 777 888
Contact No: 09958777888
Asking Price : 840
Contact No : 09958777888
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ မိုးကောင်းလမ်းမပေါ်ရှိအဆင့်မြင့် Mini Condo အခန်းများအရောင်း
► BCC ကျပြီးအသင့်နေ ► Bank ဖြင့်ချိတ်ဆက်၍နှစ်ရှည်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်
အရောင်းစျေးနှုန်း 2,100 သိန်း မှစတင်ပါသည်
ရန်ကင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ မိုးကောင်းလမ်းမပေါ်ရှိ…
Property ID: S-1199640
Asking Price : 2100.00
Property ID: S-1233527
Asking Price : 2300.00
Asking Price : 2100
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ပဒုမ္မာလမ်းမှ အခိုင်အမာဆောက်လုပ်ပြီးစီးထားသော တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
► BCC ရပြီး ► Bank ဖြင့်ချိတ်ဆက်၍နှစ်ရှည်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်
အရောင်းစျေးနှုန်း 350 သိန်း မှစတင်ပါသည်
မရမ်းကုန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ ပဒုမ္မာလမ်းမှ အခိုင်အမာဆောက်လုပ်ပြီးစီးထားသော…
Property ID: S-1233077
Asking Price : 350.00
Asking Price : 350
တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ် ၊ ဓမ္မရာဇာ( ၂၉ )လမ်းရှိ မြေညီ တိုက်ခန်း ရောင်းရန်ရှိသည်။
အရောင်းစျေးနှုန်း 900 သိန်း မှစတင်ပါသည်
တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ် ၊ ဓမ္မရာဇာ( ၂၉ )လမ်းမှ…
Property ID: S-1174910
Asking Price : 900.00
Asking Price : 900
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ဝရုဏာ ( ၄ ) လမ်းရှိ တိုက်သစ်မှရောင်းရန်ရှိသော မြေညီထပ်အခန်း
အရောင်းစျေးနှုန်း 880 သိန်း မှစတင်ပါသည်
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ဝရုဏာ (၄)လမ်းရှိ…
Property ID: S-1169432
Asking Price : 880.00
Asking Price : 880
တောင်ဥက္ကလာ ၊ မာဃ ( ၆ )လမ်းရှိ (11.6' x 54') ပေအကျယ် မြေညီထပ်အခန်းရောင်းမည်
အရောင်းစျေးနှုန်း 730 သိန်း မှစတင်ပါသည်
တောင်ဥက္ကလာ ( ၁၂ ) ရပ်ကွက် ၊ မာဃ ( ၆ ) လမ်းမှရောင်းရန်ရှိသော…
Property ID: S-1175100
Asking Price : 730.00
Asking Price : 730
တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ် ၊ မာဃ( ၅ )လမ်းမှ ရောင်းရန်ရှိသော မြေညီ တိုက်ခန်း
တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ် ၊ ( ၁၂ ) ရပ်ကွက် ၊ မာဃ…
Property ID: S-1175078
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ၊ ပုသိမ်ညွှန့်( ၃ )လမ်းမှ ရောင်းရန်ရှိသော ကြိုပွိုင့်တိုက်ခန်းများ
► BCC Pending ► Bank ဖြင့်ချိတ်ဆက်၍နှစ်ရှည်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်
အရောင်းစျေးနှုန်း 280 သိန်း မှစတင်ပါသည်
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ၊ ပုသိမ်ညွှန့်(…
Property ID: S-1210764
Asking Price : 280.00
Property ID: S-1210761
Asking Price : 800.00
Asking Price : 280
သာကေတမြို့နယ် ၊ မြို့မ ( ၁၅ ) လမ်းမှ ရောင်းရန်ရှိသော ကြိုပွိုင့် တိုက်ခန်းများ
( ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက် ဝယ်ယူနိုင်သောကြိုပွိုင့်တိုက်ခန်းများ )
အရောင်းစျေးနှုန်း 340 သိန်း မှစတင်ပါသည်
သာကေတ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
သာကေတမြို့နယ် ၊ မြို့မ ( ၁၅ ) လမ်းမှ ရောင်းရန်ရှိသော…
Property ID: S-1205129
Asking Price : 340.00
Property ID: S-1205130
Asking Price : 380.00
Asking Price : 340
လိုင်စင်ရုံးအနီး မြင်သာ (၁၀) လမ်းရှိ (14 'x 52') ပေအကျယ် တန်ဖိုးသင့်မြေညီတိုက်ခန်းရောင်းမည်
► BCC ကျပြီး ► မိမိနှစ်သက်ရာဘဏ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ နှစ်ရှည်အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ပါသည်
အရောင်းစျေးနှုန်း 700 သိန်း မှစတင်ပါသည်
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ( ၁၄ / ၁ ) ရပ်ကွက်…
Property ID: S-1175165
Asking Price : 700.00
Asking Price : 700
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ၊ ရတနာလမ်းမပေါ်ရှိ ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း
► BCC ကျပြီး ► Bank ဖြင့်ချိတ်ဆက်နှစ်ရှည်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်
အရောင်းစျေးနှုန်း 650 သိန်း မှစတင်ပါသည်
တောင်ဥက္ကလာ ( ရတနာလမ်း )မှ ရောင်းရန်ကျန်ရှိသော…
Property ID: S-1175158
Asking Price : 650.00
Asking Price : 650
အသောကမှတ်တိုင်အနီး နတ်ချောင်း (၂) လမ်းရှိ BCC ကျပြီး အသင့်နေ ပြင်ဆင်ပြီး တိုက်ခန်းများရောင်းမည်
အရောင်းစျေးနှုန်း 370 သိန်း မှစတင်ပါသည်
တာမွေ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တာမွေမြို့နယ် ၊ နတ်ချောင်း ( ၂ )လမ်းမှရောင်းရန်ရှိသော…
Property ID: S-1175122
Asking Price : 370.00
Property ID: S-1202990
Asking Price : 370
တောင်ဒဂုံ ၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမပေါ်ရှိ အင်းဝအိမ်ရာမှ ဘဏ်ချိတ်ရလုံးချင်းအိမ်လေး
( BCC ကျပြီး / ဘဏ်ချိတ်ရ )
အရောင်းစျေးနှုန်း 2,000 သိန်း မှစတင်ပါသည်
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အသေးစိတ် ကြည့်ပါဖုန်းဆက်ရန်, အီးမေးလ်ပို့ပါ
တောင်ဒဂုံ ၊ ဧရာဝဏ်လမ်းမပေါ်ရှိ အင်းဝအိမ်ရာမှ…
ဧရာဝဏ်လမ်း ၊ ( ၆၆ ) ရပ်ကွက် ၊ အင်းဝအိမ်ရာ ။
Property ID: S-1230297
Asking Price : 2000.00
Office no: 09975490553
Asking Price : 2000
Office no : 09975490553
သာကေတမြို့နယ် ၊ ဓမ္မာရုံလမ်းမှ ရောင်းရန်ရှိသော တန်ဖိုးသင့် တိုက်ခန်းများ
( ဘဏ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီး နှစ်ရှည် ၃ နှစ် မှ ၁၅ နှစ်အထိ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် )
အရောင်းစျေးနှုန်း 450 သိန်း မှစတင်ပါသည်
သာကေတ ( ဓမ္မာရုံလမ်း )မှရောင်းရန်ရှိသော…
Property ID: S-1208277
Asking Price : 450.00
Property ID: S-1208276
Asking Price : 495.00
Asking Price : 450
အောင်သစ္စာ ( ၅ ) လမ်းအနီးရှိ တန်ဖိုးသင့်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိ
# BCC ကျပြီး
အရောင်းစျေးနှုန်း 330 သိန်း မှစတင်ပါသည်
သာကေတမြို့နယ် အောင်သစ္စာ၅လမ်းရှိ အသင့်နေ၅လွှာတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်…
Property ID: S-1189116
Asking Price : 330.00
သာကေတမြို့နယ် အောင်သစ္စာ၅လမ်းရှိ အသင့်နေမြေညီထပ်တိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်…
Property ID: S-1189120
Asking Price : 790.00
Asking Price : 330
မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ် ၊ သုနန္ဒာ(၁၀) လမ်းမှ ရောင်းရန်ရှိသော တန်ဖိုးသင့် တိုက်ခန်းများ
( BCC finished )
အရောင်းစျေးနှုန်း 245 သိန်း မှစတင်ပါသည်
မြောက်ဥက္ကလာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ် ၊ သုနန္ဒာလမ်း မှရောင်းရန်ရှိသော…
Property ID: S-1203350
Asking Price : 245.00
မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ် ၊ သုနန္ဒာလမ်းမှ…
Property ID: S-1203349
Asking Price : 325.00
Asking Price : 245
ဒေါပုံမြို့နယ် ( နွယ်အေးရပ်ကွက် ) သီတာနွယ်လမ်းမှ ကြိုပွိုင့်တိုက်ခန်းများ
* Project Completion - Feb ( 2021 ) * BCC - April ( 2021 ) ခန့်မှန်း
အရောင်းစျေးနှုန်း 270 သိန်း မှစတင်ပါသည်
ဒေါပုံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဒေါပုံမြို့နယ် ( နွယ်အေးရပ်ကွက် ) သီတာနွယ်လမ်းမှ…
Property ID: S-1224965
Asking Price : 270.00
Property ID: S-1224966
Asking Price : 270
အလုံမြို့နယ် ၊ သိပ္ပံလမ်းရှိသွားလာရလွယ်ကူသောနေရာမှာရှိတဲ့ ဈေးနှုန်းသင့်မီနီကွန်ဒို
* မိမိနှစ်သက်ရာဘဏ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ နှစ်ရှည်အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ပါသည်
အရောင်းစျေးနှုန်း 1,600 သိန်း မှစတင်ပါသည်
အလုံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အလုံမြို့နယ် ၊ သိပ္ပံလမ်းမှ #2 ( ပထမထပ်…
Property ID: S-1198674
Asking Price : 1600.00
Asking Price : 1600
ဒေါပုံမြို့နယ် ( ဗမာအေးရပ်ကွက် ) ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမှ စျေးတန်မီနီကွန်ဒိုအခန်းများ
*( ကြိုက်နှစ်သက်ရာဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆတ်၀ယ်ယူနိုင်ပါသည် ) * အနောက်လှည့် * BCC Finished
အရောင်းစျေးနှုန်း 750 သိန်း မှစတင်ပါသည်
ဒေါပုံမြို့နယ် ( ဗမာအေးရပ်ကွက် ) ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမှ…
Property ID: S-1224957
Asking Price : 750.00
Property ID: S-1224956
Asking Price : 750
အင်းစိန်မြို့နယ် ၊ ( က - ၄ လမ်း ) ၊ မြို့သစ် ( က ခ ) ရပ်ကွက် မှရောင်းရန်ရှိသော ကြိုပွိုင့်တိုက်ခန်းများ
( ကြိုပွိုင့်တိုက်ခန်းများ )
အင်းစိန် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အင်းစိန်မြို့နယ် ၊ ( က-၄ ) လမ်း ၊ မြို့သစ်(…
Property ID: S-1207976
Property ID: S-1222640
Asking Price : 500.00